BBC Nin muslim ah oo la daldalay, imaamkiisana loo diiday | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Nin muslim ah oo la daldalay, imaamkiisana loo diiday
BBC Nin muslim ah oo la daldalay, imaamkiisana loo diiday
Maxbuus ku xirnaa gobolka Alabama ee dalka Mareykanka ayaa la daldalay ka dib markii ay maxkamadda ugu sarreysa ku gacan seyrtay codsigiisii ahaa inuu imaamkiisa garab taagnaado marka uu dhimanayo.
Dominique Ray oo lagu helay dambi dil ah ayaa Khamiistii lagu dilay cirbad, isagoo dilkiisana la waafajiyay wakhtigii loogu tala galay.
Qareennada difaacayay Ray ayaa ku dooday in maamulka gobolka uu asxaan u sameeyo dadka masiixiyiinta ah maadaama wadaadkooda loo oggolaado inuu qolka kula maxaabiista maxaabiista aan muslimiinta ahayd ee la daldalayo.
Imaamka uu maxbuuska muslimka ah dalbaday oo lagu magacaabo Yuusuf Maisonet ayaa lagu soo warramay inuu daldalaadda Ray ka daawanayay qol ku dhagan qolka uu ku jiray.
Maalintii Arbacada ahayd, maxkamadda racfaanka ee federaalka ayaa oggolaatay in dib loo dhigo daldalaadda maxbuuskan, iyadoo sheegtay inuu ka hadlay qodob muhiim ah isla markaana loo baahan yahay in la soo saaro go’aan dalabyada noocan ah loogu diidayo dhammaan maxaabiista muslimiinta ah iyo kuwa masiiixiyiinta ahba.
Hase ahaatee maamulka gobolka Alabama ayaa si deg deg ah kiiska ugu gudbiyay maxkamadda ugu sarreysa, taasoo ku gacan seyrtay dalabka maxbuuska amarna ku bixisay in wakhtigii loo qorsheyay lagu daldalo.
Waaxda sixitaanka khaladaadka ee gobolka Alabama ayaa horay u shaqaaleysiisay wadaad masiixi ah oo qololka maxaabiista kiristaanka ah lagu daldalayay xaadir ku ahaa tan iyo sannadkii 1997-kii, laakiin waxay diideen in wadaad aan shaqaale ahayn loo fasaxo inuu qolka galo xilli maxbuus la dilayo.
Ray ayaa mxbuus ahaa ku dhawaad 20 sano, sida uu qoray wargeyska New York Times, wuxuuna diinta islaamka qaatay intii uu ku jiray xabsiga gudihiisa.
Waxaa xukun dil ah lagu riday sannadkii 1999-kii, kadib markii uu sannadkii 1995-kii kufsaday isla markaana dilay gabar 15 sano jir ahayd.
Previous articleXukuumadda Somaliland oo Budhcad-baddeed u Aqoonsan Maraakiibta Shiinaha ee Ruqsadaha ka Qaatay Soomaaliya
Next articleTartanka maaradoonka oo dalal badani ka qaybgaleen oo Hargaysa ka Dhacay